The Rohingya News Bank : မော်လ်ဒိုက်
Showing posts with label မော်လ်ဒိုက်. Show all posts
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ ကြားဖြတ် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံရဲ့ အဆိုပြုချက်ကို ICJ နိုင်ငံတကာတရားရုံးက ဆုံးဖြတ်ချက် ချထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် Maldives နိုင်ငံက မကြာခင်မှာ ကြားဖြတ်အမှု တင်သွင်းမယ်လို့ ပြောလိုက်ခြင်းက ဒီအမှုကို ပြောင်းလဲသွားစေမှာမဟုတ်ကြောင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ Indiana တက္က သိုလ်က နိုင်ငံတကာ စစ်ရာဇ၀တ်မှုနဲ့ ရာဇ၀တ်မှုများဆိုင်ရာ ပါမောက္ခ Timothy Waters က ပြောပါတယ်။ အပြည့်အစုံကိုတော့ ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က တင်ပြပေးပါမယ်။
Labels: 2020, ICJ, mm, ဗွီအိုအေ, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း, မော်လ်ဒိုက်
အိုအိုင်စီအဖွဲ့ဝင် မော်လဒိုက်နိုင်ငံက မြန်မာကို အိုင်စီဂျေ တရားရုံးအမှုတွင် ပါဝင်တရားစွဲမည်
ရိုဟင်ဂျာတွေကို ပံ့ပိုးကူညီတဲ့အနေနဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး (အိုင်စီဂျေ)မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို တရားစွဲ ထားတဲ့အမှုမှာ ကြားဖြတ်ပါဝင်တရားစွဲမယ်လို့ အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့(OIC) အဖွဲ့ဝင် မော်လဒိုက်နိုင်ငံက ကြေညာပါတယ်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဂျီနီဗာမြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ (၄၃)ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ အစည်း အဝေးရဲ့ အဆင့်မြင့်ကဏ္ဍဆွေးနွေးတဲ့အပိုင်းမှာ မော်လဒိုက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အဗဒူလာရှာဟစ်က မြန် မာကို အိုင်စီဂျေမှာ တရားစွဲမယ့်အကြောင်း ကြေညာခဲ့တာလို့ မော်လဒိုက် နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက် နေ့စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
Labels: 2020, ICJ, mm, OIC, တရားစွဲ, မြန်မာ, သတင်း, မော်လ်ဒိုက်
ရိုဟင်ဂျာအရေး မော်လဒိုက်က ဂမ်ဘီယာကိုအားဖြည့်၊ အမားလ်ကလူနီကို ရှေ့နေငှား
Thursday, February 27, 2020 Mail
Amal Clooney participates in the Press Behind Bars: Undermining Justice and Democracy event during the 73rd session of the United Nations General Assembly in New York on September 28, 2018. (AFP)
ကိုလံဘို_ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများ၏အပန်းဖြေခရီးသွားနိုင်ငံ မော်လဒိုက်သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်များအရေးအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး(ICJ)တွင် နိုင်ငံ့ကိုယ်စားပြုအဖြစ် နာမည်ကြီး လူ့အခွင့်အရေးရှေ့နေ အမားလ်ကလူနီ ကို ငှားရမ်းထားသည်။
အိုင်စီဂျေတွင် ဂမ်ဘီယာ၏တရားစွဲမှု အောင်မြင်မှု ရရှိစေရန် တရားဝင်ပူးပေါင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း မော်လဒိုက် အစိုးရက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ပြောကြားလိုက်သည်။
Labels: 2020, ICJ, mm, ဂမ်ဘီယာ, သတင်း, အမားလ်, မော်လ်ဒိုက်, ရှေ့နေ
ရခိုင်မှ မွတ်စလင်များအတွက် တရားမျှတမှု ရရှိစေရန် မြန်မာနိုင်ငံကို ICJ တွင် မော်လ်ဒိုက်ဗ်က တရားစွဲရန် ရှေ့နေ အာမယ်ကလူနေးအား ငှားရမ်း
ကုလသမဂ္ဂ၏ International Court of Justice (ICJ) တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင်များအတွက် တရားမျှတမှု ရရှိစေရန် ကြိုးပမ်းမှုတွင် ကူညီပေးရန် ကမ္ဘာကျော်သရုပ်ဆောင် ဂျော့ရ်ှကလူနီ ဇနီးဖြစ်သူ ထင်ရှားသော လူ့အခွင့်အရေးရှေ့နေ အာမယ်ကလူနေးအား ငှားရမ်းခဲ့ကြောင်း မော်လ်ဒိုက်ဗ်အစိုးရက ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ၌ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Labels: 2020, ICJ, mm, ငှါးရမ်း, မော်လ်ဒိုက်, ရှေ့နေ
မော်ဒိုက်နိုင်ငံဟာ ရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို ICJ နိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာ ကြားဖြတ် အ မှုတင်တဲ့အကြောင်း ကြေညာပါတယ်။ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု တားဆီးရေးဆိုင်ရာ နိ်ုင်ငံတကာ သဘော တူ ညီချက်ကို ချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံရဲ့ စွဲချက်ကို ထောက်ခံပြီး၊ သူ့နိုင်ငံအနေနဲ့ ICJ တရား ရုံးမှာ ကြားဖြတ်အမှု တင်သွင်းခဲ့တာပါ။
Labels: 2020, ICJ, mm, ကြားဖြတ်အမှု, ဗွီအိုအေ, ရိုဟင်ဂျာအရေး, သတင်း, မော်လ်ဒိုက်
ရိုဟင်ဂျာအရေး အိုင်စီဂျေမှာေ မော်လ်ဒိုက် တရားဝင် ပူးပေါင်း ၊ အမားလ် ကလူနီကို ရှေ့နေငှား
မော်လ်ဒိုက်သမ္မတဟောင်းအတွက် အောင်အောင်မြင်မြင် ရှေ့နေလိုက်ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ အမားလ် ကလူနီကို ငှားရမ်းထား
ရိုဟင်ဂျာ အရေး ကုလသမဂ္ဂ အမြင့်ဆုံးတရားရုံး ICJ မှာ မြန်မာကို ဂမ်ဘီယာက တရားစွဲဆိုထားတာကို မော်လ်ဒိုက်နိုင်ငံက တရားဝင် ပူးပေါင်းပါဝင်မယ်လို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်မှာ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
ဒါ့အတွက် ထင်ရှားတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ရှေ့နေ အမားလ် ကလူနီကို ငှားရမ်းထားတယ်လို့လည်း ပြောပါ တယ်။
အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲက တောင်အာရှကျွန်းနိုင်ငံ မော်လ်ဒိုက်ဟာ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားတွေ စိတ်ဝင်စားတဲ့ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။
Labels: 2020, ICJ, mm, ရိုဟင်ဂျာ, မော်လ်ဒိုက်, ရှေ့နေငှါး